विश्वलाई अझै खतराको घण्टी ! चीनमा भेटियो कोरोना भाइरसको यस्तो नयाँ रुप, लक्षण मात्र फरक -
विश्वलाई अझै खतराको घण्टी ! चीनमा भेटियो कोरोना भाइरसको यस्तो नयाँ रुप, लक्षण मात्र फरक
काठमाडौं – चीनमा कोरोनाभाइ’रसको दोस्रो रुप देखिएको छ । जससँगै चीनमा पुनः उसैगरि महा’मारी फैलनसक्ने त्रा’स पनि फैलिएको छ । लकडाउन अन्त्य गरेसँगै हुबेई प्रान्तमा पुनः कोरोनाका नयाँ सं’क्रमि’त भेटिन थालेका हुन् ।
चीनले कोरोनामाथि एक स्तरको विजय हाँसिल गरेको चर्चा चलिरहेको बेला यस्तो अवस्था आएको हो । गत अप्रिल ८ मा चीनले कोरोनाभा’इरस नि’यन्त्रण तथा रोक’थामका लागि लगाइएको प्रति’बन्ध अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेको दिन चीनमा ६३ जना नयाँ सं’क्रमि’त भेटिएका थिए । त्यसयता चीनमा हालसम्म ७ सय ७३ जना व्यक्तिमा कोरोनाको नयाँ सं’क्रम’ण देखिएको छ ।
अनौठो त, कोरोना सं’क्रमि’त देखिएका अधिकांश व्यक्ति यसअघि पनि सं’क्रमि’त भएर निको भएका थिए । साथै संक्रमित भेटिएका कतिपय बिरामीमा सं’क्रम’ण पुष्टी भएपनि लक्षण भने देखिएका छैन् । जुन हैरानीको विषय छ । जसलाई चिकित्सकहरुले चीनमा कोरोनाको नयाँ रुप देखिएको पनि बताएका छन् ।
१०० जना कोरोना सं’क्रमि’तमा अध्ययन गर्दा ६३ जनामा यसअघि देखिएका कुनै पनि ल’क्षण नदेखिएको बताइएको छ । जसलाई चिकित्सकहरुले कोरोनाले आफ्नो लक्षण लुकाएको पनि बताएका छन् । कोरोनाको सं’क्रम’ण भएसँगै व्यक्तिमा रुघा, खोकी, ज्व’रोजस्ता स’मस्या देखिने गर्दछ । तर भेटिएका ६३ बिरामीमा त्यस्तो कुनै ल’क्षण भेटिएको छैन् ।
चीनसँगै दक्षिण कोरियाले पनि कोरोना नि’यन्त्रणमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त गरेको छ । तर दक्षिण कोरियामा पनि दोस्रोपटक सं’क्रम’ण देखिएको खबर बाहिर आएको छ । तर अनौठो उनिहरुको रिपोर्ट कुनैबेला पोजेटिभ देखिने अनि लगत्तै नेगेटिभ देखिए पनि भएको छ ।
योसँगै चिकित्सकहरुमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ, के कोरोना भाइ’रसलाई दिर्घकालीन रुपमा अन्त्य गर्न सकिन्छ ? पछिल्लो चरणमा देखिएको अनौठो स्वरुपले वैज्ञानिकहरु पनि हैरानीमा परेका छन् ।SidhaNews बाट
Previous मनकामना माइले हाम्रो मनोकामना पुरा गरुन, हेर्नुहोस आज विहिबारको राशिफल
Next अमेरिका सरकारले प्रदान गरेको राहत रकम धमाधम खातामा जम्मा हुदै